Meizu 16S ga-egosiputa ihe mmetụta MP nke 48 MP na OIS na ndị ọzọ | Gam akporosis
Na nso nso a, Meizu gosipụtara na ama ama ama ama ya, Meizu 16S, ga-oru na obodo gị na April 23. Tupu nke a emee, ụlọ ọrụ ahụ amalitelarị ịda ndokwa maka ngwaọrụ ahụ.
N'oge a, ndị na-emepụta China ekekọrịtala akwụkwọ mpịakọta n'ịntanetị nke na-ekpughe ntọala igwefoto nke smartphone na ụdị atụmatụ ya dị iche iche.
Teaser, n'ụzọ zuru ezu, na-akwado nke ahụ Meizu 16S ga-abịa na 48 MP Sony sensor dị ka igwefoto bụ isi ma ọ ga-akwadokwa OIS. Ọzọkwa, CEO na Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gbakwunye na ọ ga-ejikwa ọrụ nyocha anya na-arụ ọrụ.
Ama ama nwere ẹdụk ọtụtụ ugboro, na-ekpughe ihe niile bụ isi na njirimara nke smartphone. Dị ka leaks, ga-enwe ihuenyo 6.2-anụ ọhịa FullHD + na mkpebi nke pikselụ 2,232 x 1,080, ma a na-atụ anya ịbịa na-enweghị ọkwa ọ bụla na elu ihuenyo ahụ.
Ọzọkwa, ga-eriju afọ site na Snapdragon 855 site na Qualcomm ọ ga - enwe 8GB RAM na 128GB nke nchekwa dị n’ime. Anyị na-atụ anya na mkpanaka ahụ nwekwara ụdị nchekwa ndị ọzọ.
Banyere akụkụ ndị ọzọ, ngwaọrụ ga-abịa na igwefoto igwefoto atọ na azụ azụ, nke nwere ihe mmetụta bụ isi 586 megapixel Sony IMX48. Na ihu, ekwentị ga-egosipụta snapper 20 MP.
Meizu 16S ga - eji ihe eji eme ihe na HIFI nyopụta ihe ma tụfuo 3.5mm jack
N'aka nke ọzọ, a na-atụ anya ka arụmọrụ dị elu na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ A gam akporo 9 achịcha na omenala ụlọ ọrụ Flyme OS 7.3 interface. Na mgbakwunye na nke a, leaks na-egosi na A ga-eji ikike obodo batrị kwụọ ya bụ 3,540 mAh, nke enwere ike ịgba ụgwọ site na 24W ngwa ngwa chaja gụnyere na igbe.
Site na mbido ya na Eprel 23 na China, a na-atụ anya Meizu 16s dị na agba agba atọ: ọcha, ojii, na acha anụnụ anụnụ. Iji mara nke ọma ihe dị na uwe ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị ga-echere maka mmemme mwepụta gọọmentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 16S ga - egosiputa ihe mmetụta 48 MP na OIS na ndị ọzọ
Instagram nwere ike wepu ihe masịrị na foto